Izinto zegumbi lokuhlambela ukuze zibuyiselwe endaweni - Izinto eziBalulekileyo kwigumbi lokuhlambela ukuze ujule - Ukucoca
Izinto zegumbi lokuhlambela ukuze zibuyiselwe endaweni - Izinto eziBalulekileyo kwigumbi lokuhlambela ukuze ujule
Getty + UMegan Tatem
Indawo okhangela kuyo ukuhlamba inako ukukhula ngokubonakalayo (enkosi, ukufuma kweshawa). Kukwindawo apho uphela khona unkqonkqoza ngaphandle kwemicu yeenwele kunye neeseli zolusu olufileyo. Ezi zezinye zezizathu zokuba kufuneka uphonsa okanye uhlambe izinto ngendlela yakho yangasese rhoqo kunokuba ucinga.
Jonga igalari 9Iifoto Ifoto: Getty 1Kaninzi '9Inkunkuma ye-loofas rhoqo kwiiveki ezintathu.
Isengqiqweni ngokupheleleyo into yokuba ukuhlikihla ulusu lwakho ngepouf yonke imihla kunokubangela ukuba iiseli zolusu olufileyo zibanjwe kumnatha wonatha. Hlanganisa oku kunye neemeko ezifudumeleyo, ezifumileyo zokuhlambela kwakho kwaye kukho ithuba lokuba ibhaktheriya ivele.Kungenxa yoko le nto kufuneka uthenge entsha rhoqo kwiiveki ezintathu kwaye ulumkele ukukhula kwesikhunta.
Isoftware yoyilo lwezindlu eyi-3d
Ifoto: Getty MbiniKaninzi '9Tshintshela amalaphu okuhlamba yonke imihla.
Uninzi lwabantu basebenzisa amalaphu okuhlamba ngendlela efanayo abenza ngayo i-loofah, oko kuthetha ukuba iphela izaliswe ziiseli zolusu olufileyo. Kodwa kuba azenziwanga ngombala ofanayo, kuya kufuneka utshintshe itayile entsha yinke imihla .
Ifoto: Getty 3Kaninzi '9Yiphose isiponji emva kweenyanga ezintandathu.
Njengo Iziponji zasekhitshini , izicelo zokuthambisa ziyindawo eshushu yebhaktiriya. Zihlambe emva kwako konke ukusetyenziswa ngokuzigcwalisa ngamanzi ashushu kunye nokucudisa umbala kangangoko unakho. Masaja nge isicoca kancinci kude kungabikho umbala ubalekayo, emva koko uhlambe kwaye wome. Ukuba wenza oku, kufuneka ubeke endaweni yazo zonke iinyanga ezintandathu .
Ifoto: Getty 4Kaninzi '9Guqula iibrashi zamazinyo emva kweenyanga ezintathu.
Ayisiyiyo kuphela i-bristles enxibe ixesha elingaphezulu, kodwa ibrashi yakho iphelela ekuvezeni okuninzi ... umm ... ngaphantsi kwezinto ezimnandi kwigumbi lakho lokuhlambela. Njengaye, yithi, izinto zelindle kunye nokukhula kwebhaktiriya. Kungenxa yoko le nto kuya kufuneka uthenge ibrashi entsha rhoqo iinyanga ezintathu ukuya kwezine .
Ifoto: Getty 5Kaninzi '9Hlamba iitawuli ngeveki.
Ukuba uxhoma iitawuli zakho emva kokuhlanjululwa kwaye uzivumele ukuba zome, zinokusetyenziswa ngokujikeleza kathathu ukuya kwesine, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ubambe entshaubuncinci kube kanye (ukuba akunjalo kabini) qho ngeveki .
Ifoto: Getty 6Kaninzi '9Urhwebo ngeetawuli ngesandla yonke imihla.
Iitawuli zezandla ziba mdaka ngokukhawuleza, kuba uphela uzisebenzisa ngaphezulu kwesinye kanye ngosuku. Kungenxa yoko le nto ukuba unosapho olukhulu kufuneka uzitshintshe yinke imihla . Ukuba nguwe kunye neqabane lakho, yonke imihla embalwa uya kuyenza.
Ifoto: Getty 7Kaninzi '9Guqula imethi yokuhlamba rhoqo ngeveki.
Ukuba ibhedi yakho yokuhlambela ibona ukugcwala kweenyawo ezinzima-ngathi, yithi, undwendwelo lwemihla ngemihla kubahlobo bonyana bakho abakwishumi elivisayo- ke siyacebisa ukuba ugcine imethi yesibini ukuze ukwazi ukuyitshintsha veki nganye kwaye uhlambe enye okwangoku. Oku kunceda nokuthintela ukwakhiwa kweenwele ze-epic nazo (bezikhona).
Inkqubo yombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Ifoto: Getty 8Kaninzi '9Faka endaweni yokucoca ubuso emva konyaka.
Unokucinga ukuba 'yisepha ngoko ke ayinakuphelelwa!' Hayi. Eyakho umcoci ebusweni ihlala kuphela unyaka, ke ukuba awuyisebenzisi kwelo xesha, yiphose kwaye uthenge enye. Ngale ndlela awuyi kuba nexhala ukuba ifomula isekhona ukuya kwinqanaba.
Ifoto: Getty 9Kaninzi '9I-linvers shavers liners qho kwiinyanga ezintathu.
I-liner echazwe ngumngundo yi hayi umbono omhle. Ukuthintela oku, gxotha ikhethini lakho kumatshini wokuhlamba qho kwiinyanga ezintathu - okanye ngalo lonke ixesha uqala ukubona ukungcola okunyusa amacala. Emva koko jinga ukoma .
OkulandelayoUkutya oku-11 okwenyani okwenza ezona zicocekileyo Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiULauren Smith McDonough Umhleli oMkhulu ULauren ungumhleli ophezulu kwi-Hearst.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Kim kardashian idilesi yendlu
I-Airbnb echibini como italy
indlela yokwenza igumbi lokuhlambela
ipeyinti eluhlaza eluhlaza